Wararka ka imaanaya dalka Itoobiya ee ku aaddan shilkii diyaaradeed ee shalay ka dhacay duleedka magaalada Addis ayaa daqiiqadba daqiiqada ka dabbeyso isasoo taraya.
Xog la helay ayaana sheegeysa in dadka ku dhintay Shilkaasi ay ku jireen in ka badan 19 shaqaale oo u shaqeynayay hay'adaha kala duwan ee Q.Midoobe kuwaas oo xilal sarsare ka hayay xafiisyada ay Q.Midoobay ku leedahay Bariga Afrika.
Dadkan ayaa la sheegay in ay kusii wajahnaayeen magaalada Nairobi halkaas oo uu ka dhici lahaa kulan ay soo qaban qaabisay Q.Midoobay oo looga doodi lahaa xaaladaha wadamada dhaca geeska Africa oo ay Soomaaliya kamid tahay, sida lagasoo xigtay Agaasimaha hey’ada Qooxotiga dunida ee hoos tagta Qaramada midobe.
19 qof oo u kala dhashay wadama kala duwan ayaa kamid ahaa 157 qof ee shalay naftooda ku waayey burburka diyaarad nooceedu yahay Boeing 373, oo kuguda jirtay socdaal ay ku tagi lahayd magalada Nairobi taas oo xiriirkeeda la waayay 6 daqiiqo kadib markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Pole international ee magalada Addis ababa oo ah caasimada dalka Itoobiya.
Antinio Vitorino oo ah Agasimaha hey’ada IMO ayaa ka dhawaajiyay in sidoo kale ay jiren dad u shaqeynayay hey’ado maxalli ah oo goobta ku dhintay, kuwaas oo kulanka UN-ka magaalada Nairobi ka qeyb qaadan lahaa inkasta oo uu ku gaabsaday in uu faafaahin ka bixiyo tiradooda iyo wadamada ay kasoo kala jeedaan.
Waxa uu tilmaamay in 6 kamid ah Shaqaalahooda ay wateen Passapor-ka gaarka ah ee UN-ka halka kuwa kalena ay ku socdaalayeen Passaporrada wadamada ay kasoo kal jeedaan, isagoo intaas raaciyey in dhamman Hey’adaha WFP, IOM, UN Refugee Agency, World Bank iyo Hey’adda horumarinta deegaanka ay saaxiibo qaali ah ku waayeen Shilkaasi diyaaradeed wuxuuna tacsi u diray saaxiibadii ay la shaqeynayeen iyo ehallada dhammaanba dadkii halkaas ku dhintay.
Hey’adda IMO ayuu tilmaamay in uu kaga dhintay nin lagu magacabo Anne Feigel oo ka shaqeynayay xafiiskooda dalka Suudaan kaas oo ahaa mas'uul sare oo katirsan Hey’addan in badana usoo shaqeynayay Q.Midoobay.
Haweney lagu magacabo Cathrine oo ahayd mas'uulka fulinta Mashaariicda IMO ee dalka Sudan ayaa sheegtay in Feigl uu ahaa nin howl kar ah aqoon durugsana u leh la dhaqanka bulshada iyadoo intaas ku dartay in uu kaalin weyn ku lahaa in Suudanta Kofured ay ka go’do Suudaan inteeda kale.
David Beasley oo ah agaasimaha hay’adda WFP ayaa isna xaqiijiyey in 7 kamid ah Shaqaalihisiisa ay shilka diyaaradeed ku dhinteen wuxuuna xusay in dad qaali ah ay halkaas ku waayeen hadana ay ku guda jiraan baroor diiq ay u dhigayan asaxaabtii ay halkaas ku waayeen.
Antonio Guterres oo ah madaxa hay'adaha Q.Midoobay ayaa tacsi u diray dhammaan ehellada dadki ku dhintay Shilkii shalay ka dhacay Itoobiya si gaar ahna waxa uu sheegay in hay’adooda ay shalay u ahayd maalin madoo halkaasna ay ku waayeen dad qaali ah sida uu hadalka u dhigay.
Dhammaan dadkii 157da qof ahaa ee saarna diyaaradda Boeing 737 MAX ee burburtay ayaa la xaqiijiyey in ay u kala dhasheen illaa 35 dowladood, waxaana kamid ah 33 qof oo u dhashay wadanka Kenya, 18 qof oo u dhashay wadanka Canada, 9 Ethiopian ah, 8 Shiinees ah, 8 Talyaani ah, 8 American ah, 7 Faransiiska, 7 u dhashay wadanka Ingiriiska, 6 u dhashay wadanka Masar, 5 kasoo jeeda wadanka Holland, 4 Hindi ah, 3 Ruush ah, 2 Morocan ah, 2 qof oo Yuhuud ah, iyo kuwa kale oo kasoo kala jeeda wadamada Yemen, Sudan, Togo, Norway iyo wadamo kale.
Ilaa lix qof oo Soomaali ah ayaa la xaqiijiyay in sidoo kale ay shilkan ku dhinten, kuwaas oo kala ah, Amina Ibraahim Odawaa iyo gabar ay dhashay oo lagu magacabo Safiyo Feysal Cigale, Sahra Xassan iyo wiil ay dhashay oo lagu magacabo Nasrudiin Cabdulqadir, Cabdi Shakuur Moxamed Shahaad oo ahaa Sarkaal katirsan xafiiska Raisal Wazaraha Somalia Xassan Cali Kheyre, iyo nin kale oo magaciisa lagu sheegay Siraaj Xussien Cabdi.
Shirkada dulimaadyada Ethiopia ayaa maanta barqadii ku dhawaqday in ay hakad galisay dhammaan duulimaadyadii Shirkada Boeing 373 Max, taas oo ay iska lahayd diyaaradi Shalay burburtay waxayna amar ku bixisay in aan la isticmaali Karin diyaaradahaasi ilaa amar dambe.
Dowlada Shiinaha ayaa sidoo kale iyana ku dhawaaqday inay joojisay guud ahaanba isticmaalka Diyaarada Boeing 373 Max, saacidihi lasoo dhaafay ayayna amar ku bixisay in lasoo dajiyo in ka badan 150 diyaarad oo noocaas ah oo ay ku socdaalayay hawada dalka Shiinaha, iyadoo sababta ku sheegtay arrimo la xiriiro xagga nabad galyada safarka ah iyo baqdinta laga qabo in cilada burburka keentay ay tahay cillad farsamo oo diyaaradahani kujirta.